ဂျယ်ဂျူးကျွန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျယ်ဂျူးကျွန်းအား ဂြိုဟ်တုဓာတ်ပုံဖြင့် မြင်ရစဉ်
ဂျယ်ဂျူး (ကိုရီးယား: 제주도) သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးကျွန်း ဖြစ်သည်။ ဂျယ်ဂျူးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်တွင် ရှိပြီး ဧရိယာအားဖြင့် ၁၈၃၃.၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်သည်။  တောင်ကိုရီးယားမြေ၏ ၂% မျှ ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ စစ်တမ်းအရ လူဦးရေ ၆၇၀,၀၀၀ မျှ နေထိုင်သည်။ 
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အစွန် ကိုရီးယားရေလက်ကြားတွင် ရှိပြီး (တောင်)ဂျိုလာပြည်နယ်၏ တောင်ဘက်တွင် ဖြစ်သည်။ ဂျယ်ဂျူးရှိ ဂျယ်ဂျူးပြည်နယ်သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ တခုတည်းသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်လည်း ဖြစ်၏။
လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂ သန်းခန့်က မီးတောင်ပေါက်ကာ ဖြစ်လာသောကျွန်းတည်း။  ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင် ဖြစ်၏။  ကျွန်းပေါ်၌ ရာသီဥတုမျှတပြီး ဆောင်းကာလ၌ပင် ၀ ဒီဂရီဆဲလစီးယပ်အောက် မကျပေ။ ဂျယ်ဂျူးသည် ကျော်ကြားသော အားလပ်ရက်အပန်းဖြေရာဖြစ်ပြီး ကျွန်း၏စီးပွားရေးတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကလည်း အတော်အသင့် ထောက်ပံ့နေသည်။
↑ “120417(조간)_2012년도_지적통계연보_발간(지적기획과1)” (HWP). April 16, 2012. The total area of the Jeju Special Self-Governing Province is 1,849 km.
↑ Ministry of Public Administration and Security, September 30, 2020. At the end of September 2020, the total resident registration population of Jeju Special Self-Governing Province is 672,948, of which 4,000 reside in attached books such as Chuja Islands and Udo Island.
↑ "Jeju Island". Business Traveller. February 2011.
↑ "UNESCO names World Heritage sites". BBC News. June 28, 2007.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျယ်ဂျူးကျွန်း&oldid=687512" မှ ရယူရန်